Mediam-bahoaka · Jona, 2019 · Global Voices teny Malagasy
Mediam-bahoaka · Jona, 2019
Tantara mikasika ny Mediam-bahoaka tamin'ny Jona, 2019
Karaiba29 Jona 2019
Taona vaovao, fiainana vaovao ary andao hifanampy!
vondrom-piarahamonina28 Jona 2019
Tongasoa eto amin'ny taratasim-baovao Lingua 2019 an'ny Global Voices! Ary nahatratra ny taona daholo! Taona sarotra sady nahafinaritra ny taona 2018. Traikefa niainana ny fahaterahan'ny zanako vavy, Sophia izany ary koa andraikitra mahafinaritra amin'ny maha-reny. Koa dia taona nampientanentana ny taona 2018, nanatontosa resadresaka maromaro, nikarakara fihaonana, nizara toro-hevitra, namana notsaroana, fiarahamiasa mitohy ary nanangana tranonkala Lingua isika!
Dika28 Jona 2019
Rising Voices28 Jona 2019
Kirin'ny lehilahy iray hianika ireo tendron-kavoana 14 avo indrindra ao anatin'ny 7 volana hanamontsanana ny zavabita tsara indrindra
Azia Atsimo27 Jona 2019
14 monja ny tendrombohitra manana haavo mihoatra ny 8000 metatra ary eo am-panatanterahana fanamontsanana zavabita tsara indrindra ho ao anatin'ny fito volana monja ilay miaramila britanika Gurkha antsoina hoe Nirmal Purja.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana27 Jona 2019
Blaogera maro indray no niresaka mikasika ny lohahevitra maro tao amin'ny tontolon'ny blaogy Syriana.
Torohevitra isankerinandro mikasika ny Fanoratana: Mifandray amin'ny Mpamaky
Manazava i Janine, mpanonta lahatsoratra GV ho an'ny faritra Karaiba, fa ireo lahatsoratra miresaka amin'ny olona no manako indrindra any amin'ny mpamaky.
Dika26 Jona 2019
Avy any amin'ny Tahiry: Vongany 7 amin'ny Soratra Feno Fahendrena
Taona roa mahery nanomezana Torohevitra Isankerinandro Momba ny Fanoratana izay midika fa nifampizara torohevitra tsara marobe isika momba ny fanoratana sy ny fanaovana tatitra. Amin'ity #TamberinaAlakamisy ity, ndeha hiverenantsika jerena ireo lasa.